သူမကြောင့် ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် ဝေးခဲ့ရတာပါ … - ONE DAILY MEDIA
သူမကြောင့် ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် ဝေးခဲ့ရတာပါ …
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သိပ်ကိုချစ်ခဲ့ကြသလို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နှစ်တွေအကြာကြီးချစ်ခဲ့ကြတယ် တစ်နေ့မှာတော့ မထင်မှတ်ပဲ ကျွန်မတို့ လမ်းခွဲခဲ့ကြတယ်ဆိုရင် မအံ့သြပါနဲ့ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ကြားကို ကောင်မလေးတစ်ယောက် ဝင်လာမှန်းမသိ ဝင်လာခဲ့တယ်လေ ..
သူမက ကျွန်မထက်ငယ်တယ် .. ပြီးတော့ စကားပြောသွက်လက်တယ် သူသိပ်ကြိုက်တဲ့ ချိုချိုအီအီလေးတွေ ပြောတတ်တယ်လေ … ကျွန်မက ခုကျတော့ သူ့အတွက် ဘုကလန့်ပေါ့ စကားပြောတာလဲ သူ့နားထဲ နားဝင်တွေမချိုတော့သလို ကိုယ်စိတ်ပူသမျှကလဲ နားပူနားဆာသက်သက် ဖြစ်ခဲ့ပြီလေ …
သူမကလဲ မိန်းမသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် စနိုက်ကျော်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကြမ်းတွေကို မသုံးချင်တော့ပါဘူး ငယ်ရွယ်ပြီးမှ မာယာများတတ်တဲ့အတွက်တော့ ကျွန်မ နဲနဲတော့ စလံသမိတယ် လက်လန်တယ်ပေါ့ … ကိုယ်နဲ့သူဟာ တိတ်တိတ်လေး တွဲခဲ့တာမဟုတ်ပဲ Official ချပြပြီးတွဲခဲ့တာတောင်မှ သူမ ဘာကြောင့် ရှိလာရတာလဲတွေးရခက်တယ်
တစ်ဖက် မိန်းကလေးကိုပဲ အပြစ်တော့တင်မနေတော့ပါဘူး … ကိုယ့်လူကိုက မကောင်းခဲ့တာလေ ကျွန်မကိုသာ သိပ်ချစ်ခဲ့ရင် သူမဆိုတဲ့ နောက်တစ်ယောက်တောင် ထပ်ရှိစရာမှမလိုတော့တာ … စိတ်ကစားတယ်ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေပေးရအောင်လဲ ကျောင်းနေရွယ်တွေမှ မဟုတ်ခဲ့တာ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ နှစ်ရှည်လများ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ Relationshipလေးတစ်ခုကတော့ ခုမှ ပေါ်လာတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကြောင့် ပြိုပျက်ခဲ့ရပါပြီ … ကျွန်မ လှည့်ထွက်ခဲ့ရုံက ရွေးစရာလမ်းတွေမရှိတဲ့ဘဝမှာ နှစ်ယောက်အဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့ ဆုပဲတောင်းပေးခဲ့မိတယ်
တစ်ခြားတစ်ယောက်ဆီက လုယူခဲ့ရတဲ့ အချစ်ကို နောက်တစ်ယောက်က လုယူသွားမှာမကြောက်ဘူးလားလို့ကျွန်မ သူမကို မေးနေချင်မိတယ် … သူမ အလှည့်ကျရင်တော့ ကျွန်မလိုပဲ ကြည်ဖြူပေးနိုင်မလားလို့သိချင်မိတယ် … ဘာကျိန်စာမှ မတိုက်ရက်ပါဘူး သူနဲ့သူမ နှစ်ယောက် ပျော်ပါစေ ….
သူမေၾကာင့္ ကြ်န္မတို့ႏွစ္ေယာက္ ေ၀းခဲ့ရတာပါ …
တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ သိပ္ကိုခ်စ္ခဲ့ၾကသလို တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ နွစ္ေတြအၾကာၾကီးခ်စ္ခဲ့ၾကတယ္ တစ္ေန့မွာေတာ့ မထင္မွတ္ပဲ ကြ်န္မတို့ လမ္းခဲြခဲ့ၾကတယ္ဆိုရင္ မအံ့ၾသပါနဲ႕ ကြ်န္္မတို့ႏွစ္ေယာက္ၾကားကုိ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ ၀င္လာမွန္းမသိ ၀င္လာခဲ့တယ္ေလ ..
သူမက ကြ်န္မထက္ငယ္တယ္ .. ျပီးေတာ့ စကားေျပာသြက္လက္တယ္ သူသိပ္ၾကိဳက္တဲ့ ခ်ိဳခ်ိဳအီအီေလးေတြ ေျပာတတ္တယ္ေလ … ကြ်န္္မက ခုက်ေတာ့ သူ့အတြက္ ဘုကလန့္ေပါ့ စကားေျပာတာလဲ သူ့နားထဲ နား၀င္ေတြမခ်ိဳေတာ့သလို ကုိယ္စိတ္ပူသမွ်ကလဲ နားပူနားဆာသက္သက္ ျဖစ္ခဲ့ျပီေလ …
သူမကလဲ မိန္းမသားတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ စနုိက္ေက်ာ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးၾကမ္းေတြကို မသံုးခ်င္ေတာ့ပါဘူး ငယ္ရြယ္ျပီးမွ မာယာမ်ားတတ္တဲ့အတြက္ေတာ့ ကြ်န္္မ နဲနဲေတာ့ စလံသမိတယ္ လက္လန္တယ္ေပါ့ … ကိုယ္နဲ႕သူဟာ တိတ္တိတ္ေလး တြဲခဲ့တာမဟုတ္ပဲ Official ခ်ျပျပီးတြဲခဲ့တာေတာင္မွ သူမ ဘာေၾကာင့္ ရွိလာရတာလဲေတြးရခက္တယ္
တစ္ဖက္ မိန္းကေလးကိုပဲ အျပစ္ေတာ့တင္မေနေတာ့ပါဘူး … ကုိယ့္လူကိုက မေကာင္းခဲ့တာေလ ကြ်န္မကုိသာ သိပ္ခ်စ္ခဲ့ရင္ သူမဆိုတဲ့ ေနာက္တစ္ေယာက္ေတာင္ ထပ္ရွိစရာမွမလိုေတာ့တာ … စိတ္ကစားတယ္ဆိုတဲ့ ဆင္ေျခေပးရေအာင္လဲ ေက်ာင္းေနရြယ္ေတြမွ မဟုတ္ခဲ့တာ
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ပါ ႏွစ္ရွည္လမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ Relationshipေလးတစ္ခုကေတာ့ ခုမွ ေပၚလာတဲ့ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ေၾကာင့္ ျပိဳပ်က္ခဲ့ရပါျပီ … ကြ်န္မ လွည့္ထြက္ခဲ့ရံုက ေရြးစရာလမ္းေတြမရွိတဲ့ဘ၀မွာ နွစ္ေယာက္အဆင္ေျပပါေစဆိုတဲ့ ဆုပဲေတာင္းေပးခဲ့မိတယ္
တစ္ျခားတစ္ေယာက္ဆီက လုယူခဲ့ရတဲ့ အခ်စ္ကို ေနာက္တစ္ေယာက္က လုယူသြားမွာမေၾကာက္ဘူးလားလုိ ့ကြ်န္မ သူမကို ေမးေနခ်င္မိတယ္ … သူမ အလွည့္က်ရင္ေတာ့ ကြ်န္္မလိုပဲ ၾကည္ျဖဴေပးနုိင္မလားလုိ ့သိခ်င္မိတယ္ … ဘာက်ိန္စာမွ မတိုက္ရက္ပါဘူး သူနဲ႕သူမ နွစ္ေယာက္ ေပ်ာ္ပါေစ ….
အရမ်းလွမ်းတယ် ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ မပတ်သက်တော့ဘူး ….